Makà info! mitady antsipirihany momba ny Hot Sell Cheap Bonnell Spring kidoro ho an'i Afrika, kidoro rafitra spring bonnell, kidoro bonask bonnell, kidoro Bonnell Spring
Rayson any amin'ny faritra indostrialy Rayson, làlana Huasha, Shishan, Foshan High-Tech Zone, Guangdong, Sina. Vokatra lehibe matihanina amidy mafana kidoro Bonnell lohataona ho an'ireo mpanamboatra an'i Afrika
Ny vokatra dia miavaka amin'ny alàlan'ny fanatsarana azy io. Izy io dia afaka manohana torolàlana maro hamita karazan'asa maro samihafa.
Ireo mpanjifa izay te hahafantatra bebe kokoa momba ny vokatra vaovao na ny orinasanay, mifandraisa aminay fotsiny. Mampanantena izahay fa ny vokatra dia alefa any amin'ny mpanjifa azo antoka sy milamina. Raha manana fanontaniana ianao na te hahafantatra bebe kokoa momba ny, dia antsoy izahay mivantana. Taorian'ny taona maro nivoarana dia nanangana fifandraisana fiaraha-miasa maharitra amin'ny mpanjifantsika izahay manerantany. Azafady mba matokia fa zonay ny manondrana ny vokatray ary tsy hisy ny simba amin'ny entana aterina. Raisinay an-tsitrapo ny fanontanianao sy ny antsonao.
Inona avy ireo fomba fandoavam-bola ekenao? LC amin'ny fahitana / avy amin'ny TT, Deposi 30% ary fifandanjana 70% dia mifanohitra amin'ny kopian'ny antontan-taratasy fandefasana witinin 7 andro fiasana. Ahoana no famoahana kidoro? 1. Apetaho amin'ny baoritra eo amin'ny efitranonao ny baoritra, esory tsara ny kidoro ary apetraho eo am-pandrianao. 2. Sasao tsara amin'ny kitapo ny kitapo ivelany mba hahazoana antoka fa tsy hokapainao ny plastika ratsy ao anatiny na ny kidoro, aza mitory antsy. 3. Esory eo ambony fandrianao ilay kidoro nasiana tombo-kase 4. Sasao tsara ny kitapo plastika miaraka amin'ny famantaranandro rehefa manomboka decompress ny kidoro, esory ny kitapo plastika. 5.Avelao hanitatra 24 ora ny kidoro anao vaovao. Azoko atao ve ny mitsidika ny orinasa misy anao? Eny, tongasoa eto hitsidika ny orinasa misy antsika amin'ny fotoana rehetra, eo akaikin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenen'i Guangzhou Baiyun izahay, maharitra adiny iray amin'ny fiara fotsiny, ary afaka mandamina fiara haka anao izahay.